Iphupha Malunga noMdlezana Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umbelekisi yenye yezona fundo zabasetyhini zindala. Eli gama lisetyenziselwa ukuchaza abasetyhini abakhathalela abasetyhini abakhulelweyo ngexesha lokukhulelwa, kokubeleka kunye ne-puerperium. Kodwa kwanasemva kwexesha, ababelekisi bayacebisa kwaye babakhathalele oomama abasebatsha.
Kutheni umbelekisi ngoku ephupha? Kumfazi okhulelweyo, umxholo wephupha elinjalo awuyonto ingaqhelekanga, kuba lo ngumxholo osondeleyo. Kodwa luhlobo luni lomyalezo onolu phawu lwephupha ukuba umntu uphupha ngalo njengendoda okanye njengowasetyhini ongakhulelwanga?
1 Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika uphawu "umbelekisi" njengendawo ekubhekiswa kuyo imfihlo okanye isigil. Oku kuhlala ebumnyameni kude kube ngoku, kodwa ngoku kungena kulwazi lwomphuphi okanye ngoku kuya kukufumanisa ebomini bokuvuka.
Nabani na othetha nengcali yokubelekisa ephupheni ufumana uqikelelo lokuzalwa okanye lokubhaptizwa. Ukuba ubona umbelekisi encedisa ekuzaleni esibhedlele ephupheni, kungekudala uya kuvunyelwa ukuba wenze into Nuevo ukubala ebomini bokwenyani. Oku kunokuthetha utshintsho kubomi bakho babucala okanye kubungcali. Kodwa ukuphuhliswa kwesakhono esitsha nako kunokuba ngasemva koku.
Uviwo olwenziwe ngumbelekisi ephupheni lunako, ngokokuhlalutya ngokubanzi kwephupha, ngenxa yokuzisola okanye ukuzisola. Ukuziva unetyala Iingoma. Ukuba umphuphi ngokwakhe ungumongikazi okhulelweyo olalayo onceda umfazi ukuba azale umntwana, uya kuthi ngokukhawuleza enze into ethile ebomini bokuvuka.
Ukuba umbelekisi unika umfazi okhulelweyo ephupheni i-cocktail yokuhambisa ngeoyile ye-castor, umntu kufuneka ajongane namava abuhlungu obomi bakhe.
Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, umbelekisi umi njengophawu lokuphupha kwalowo usondelayo. utshintsho. Ngokukodwa ukuba oku kubonakala ngokunxulumene nokubeleka ephupheni, lo mbandela ungasetyenziswa.
Umbelekisi njengomfanekiso wephupha onceda umntu obhinqileyo ukuba abe nomntwana unokukwenza ukulangazelela oko Isiqalo esitsha okanye uphawu lokumiliselwa kweprojekthi ethile. Kuba kuphela ngoncedo lwabanye uya kuba nakho ukuphumeza izicwangciso zakho zabucala okanye ezorhwebo.
Ukuba umphuphi ufuna umbelekisi xa elele ngexesha lokukhulelwa, oku kungabonisa umnqweno wokwenyani wokuba nomntwana okanye uloyiko lokukhulelwa okungafunekiyo. Ukuba intombi isebenzisa ikomityi yokutsala ngexesha lokubeleka ukuzisa umntwana emhlabeni, umphuphi kufuneka azi ukuba unabambalwa kuphela bokufezekisa iinjongo zakhe. ingxaki kufuneka icace.
Ngamanye amaxesha umfanekiso wephupha wombelekisi unokuvela ngokwenkcazo yengqondo yephupha. Ukuthintela bonisa kwindawo yesondo. Oku kufuneka kuvavanywe ngokusondeleyo ngumphuphi kwi el mundo ukuvuka. Uncedo lobungcali luya kufuneka kule nto.
Uphawu lwephupha «umbelekisi» - ukutolika kokomoya
Umbelekisi obonwa ngokomoya ephupheni unokuqondwa njengophawu lomntu, lokuba umntu ophuphayo ene Ukuqonda iya kuba luncedo kwinqanaba eligqithisileyo.